विवादित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदै, यस्ता छन् विवादास्पद प्रावधान - Nepal Post Daily
यो प्रावधानमा पनि समस्या देखिन्छ। पहिलो, कसले सामाजिक सञ्जालमा के सम्प्रेषण गर्न लागेको विभागलाई कसरी थाहा हुन्छ? लाखौं प्रयोगकर्ताको मनमा केके फुर्छ, त्यसको नियमन गर्न सम्भव छ? बरु, सरकारको आँखी भएका केही व्यक्तिलाई निगरानी र हतोत्साही बनाउन मात्रै यो विधेयकको प्रयोग हुनसक्छ।
दोस्रो, कुन विषय ठीक हो वा होइन, त्यो छुट्याउने अधिकार अदालतलाई होइन, विभागलाई दिइएको छ। विभागको नेतृत्व अर्थात् महानिर्देशकलाई सारा प्रयोगकर्ताको निगरानी गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ। आफ्नो बुझाइ अनकूल भएन भने हटाउन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ। निर्देशन नमाने सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो, सरकारलाई मन नपरेका जुनसुकै विषय हटाइन सक्ने भयो। सरकारको कुनै निर्णयले शान्ति सुरक्षामा असर गर्‍यो वा भ्रम फैलियो भन्दै हटाइन सक्ने भयो भन्दै हटाइन सक्ने भयो। दफा ९४ (ग) मा ‘प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण’ गर्न नहुने उल्लेख छ। सानातिना विषय पनि भ्रम फैलने नाममा हटाइन सक्नेभयो। जसले गर्दा सरकारले चाहेको जस्तो विषय मात्रै सामाजिक सञ्जालमा रहने अवस्था आउँछ।
चौथो, नागरिकले लेख्ने यस्ता हरेक विषयमा चासो राख्नु सेन्सरसिपको अभ्यास हो।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
तर यहाँ निरन्तर भनेको कतिपटक हो? उही शब्द वा प्रसंगले निरन्तरको प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्छ कि फरकफरक सन्दर्भ पनि कायम हुन्छ? फरकफरक विषयमा फरकफरक कुरा सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ कि एउटा विषयमा पटकपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ। दुई वा तीनपटक कतिपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ? त्यस्तै, जिस्काएको, झुक्याएको, हप्काएको, भ्रमित पारेको भनेको के हो? यस्ता विषयको सर्वमान्य परिभाषा के हो? यस्ता विषयको ठहर सरकारका मान्छेले गर्न अधिकार राखेपछि नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ पुग्छ? यी यस्ता प्रश्न यो प्रावधानसँग सम्बन्धित भएर उठेका छन्।
Previous articleभारतमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित, एकैदिन १ लाख २६ हजार थपिए
Next articleमुलुकभर वायु प्रदूषणमा केही सुधार